चाडपर्वको खानपानले पेट बिग्रिएको छ ? यसरी राखौं पाचन प्रक्रिया चुस्त « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
चाडपर्वको खानपानले पेट बिग्रिएको छ ? यसरी राखौं पाचन प्रक्रिया चुस्त
२०७४, ५ कार्तिक आईतवार ०८:४२ मा प्रकाशित
दशैं-तिहार । मीठोमसिनो खाने पर्व । दशैंमा मासुजन्य परिकार खाएका हुन्छौ । तिहारमा मिठाई । मीठो मसिनो देखेपछि हामी मुखलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौ । त्यही कारण अनियन्त्रित खान्छौ । यसको असर चाडपर्व सकिएसँगै देखा पर्न थाल्छ । अर्थात हाम्रो पाचन यन्त्रमा समस्या देखापर्न सक्छ ।
अतः यहाँ पाचन यन्त्र कसरी चुस्त बनाउने भन्ने चर्चा गरिएको छ । जब हाम्रो पाचन यन्त्र कमजोर हुन्छ, अनेकौ रोगले सताउन थाल्छ । खाएको कुरा राम्ररी पचेन भने हाम्रो शरीरमा पोषण पनि अपर्याप्त हुन्छ । यसले शरीरको प्रतिरक्षा क्षमता गुमाउँछ ।पाचनतन्त्रले खानेकुरालाई सानो सानो टुक्रामा, जस्तै ग्लुकोज, एमिनो एसिड, फ्याटी एसिडमा तोड्छ । त्यसपश्चात यी पौष्टिक तत्व तपाईंको रगतमा समाहित हुन्छन् र शरीरका विभिन्न भागमा पुग्छन् ।सुस्त पाचनको कारणले कतिसम्म दुख पाइन्छ भन्ने कुरा तिनीहरुलाई बढि थाहा हुन्छ जो ग्यास्टि्रक, कब्जियत वा डाइरियाबाट पिडित छन् ।
पाचनको प्रक्रिया मुखबाट सुरु हुन्छ, जहाँ तपाईंको दाँतले भोजनलाई पिसेर र्‍यालमा रहेका इन्जाइम्सले यसलाई टुक्र्याउन सुरु गर्छ । त्यसपछि आधा पचेको भोजन हाम्रो सानो आन्द्रामा पुग्छ ।
त्यसपछि भोजनलाई ठूलो आन्द्रामा पठाइन्छ । र, यसका उपयोगी पदार्थहरु शरीरले ग्रहण गर्छ । बाँकी भोजन त्यागका लागि ठूलो आन्द्राबाट बाहिर निकालिन्छ । यति जटिल पाचनतन्त्रलाई स्वस्थ राख्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । तर कसरी ?
यस्तो छ काइदा-
सँधै समयमा खाना खानुस । यसको समय यताउति हुनु हुँदैन । खाना बिस्तारै खानुपर्छ । बढिभन्दा बढि चबाएर मात्र निल्नुपर्छ । यदि तपाईं अक्सर पेटको गडबडी वा अपचबाट पिडित हो भने खाना खाने समयलाई अलि अगाडि सार्नुपर्छ । सुत्नुभन्दा ३ देखि ४ घन्टा अगाडि खाना खाइसक्नुपर्छ ।
फाइबर तपाईंको पाचनतन्त्रका लागि एकदमै उपयोगी हुन्छ । घुलनशील फाइबरले पानीलाई अवशोषित गर्छ र तपाईंको निस्काशन सही हुन्छ, जो आफ्नो आन्द्रामार्फत सजिलै बाहिर निस्किन्छ । खानामा फाइबर कम हुँदा कब्जियत, इर्रिटेबल बाउल सिन्ड्रोम, डाइभर्टिकुलिटिस र कोलन क्यान्सर जस्ता पाचनतन्त्रसँग सम्वन्धित कयौं विकार उत्पन्न हुन सक्छन् ।
महिलाहरुले प्रत्येक दिन २.१ लीटर तरल पदार्थ तथा पुरुषले २.६ लिटर पानी पिउनु आवश्यक हुन्छ । गर्मी मौसम वा शारीरिक परिश्रम गरेर पसिना बाहिर निस्किएको छ भने झन् बढि परिमाणमा पिउनुपर्छ ।
प्रो बायोटिक्स एक यस्तो ब्याक्टेरिया हो जसले पाचन तन्त्रलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । यो डायरिया र इर्रिटेबल बाउल सिन्ड्रोम जस्ता अवस्थाहरुमा पनि निकै सहयोगी सावित हुन सक्छ । यस्तो ब्याक्टेरियालेे आन्द्राको अम्लतालाई बढाएर हानिकारक जीवाणूहरुको विकासलाई रोक्न मद्दत पुर्‍याउँछ । दहीमा प्रोबायोटिक्स हुने भएकाले यसको सेवन गर्नु फाइदाजनक हुनेछ ।
आफ्नो पाचनमा सुधार ल्याउने विषयमा सोच्दा तपाईंको दिमागमा अमिलो फल पक्कै आउँदैन । तर, निबुवाको रस पारम्परिक रुपमा पाचनका लागि प्रयोग गरिदै आएको छ । निबुवाको गन्ध र स्वाद दुवैले अत्यधिक र उत्पादन गर्न मद्दत गर्नेछ । निबुवाजस्तै सुन्तला पनि पाचन प्रणालीमा सहयोगी हुन सक्छ ।
जडिबुटी र मसलाले भोजनमा स्वाद मात्रै बढाउँदैन, बल्कि यसले तपाईंको पाचनमा पनि सहयोग पुर्‍याउँछ । यसको स्वाद र गन्ध दुवै ग्यास्टि्रक र र्‍याल पैदा गर्न सहायक हुन्छ । उदाहरणका लागि धनिया, अदुवा, जिरा, मरिच, खुर्सानी र बेसारले तपाईंको पित्त अम्ललाई बढाएर कार्बोहाइड्रट र बोसोलाई पचाउन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ ।
बढि बोसोयुक्त भोजन पच्न लामो समय लाग्छ, जसको कारणले पेटको बोझ बढ्न जान्छ र उच्च बोसोयुक्त खाद्य पदार्थको बदला माछा र लीन मिट जस्ता बोसो कम भएका खानेकुरा खानु उपयुक्त हुन्छ ।-अनलाइनखबर